शुक्रबार, असार २५, २०७८ नवीन गिरी
२०४८ सालमै गृहमन्त्री भएका थिए, अहिलेका कांग्रेस पार्टी सभापति शेर बहादुर देउबा । ४५ बर्षकै उमेरमा गृहमन्त्री बनेका उनी ४९ बर्षमै प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकको बागडोर सम्हाले । २०५७ मै ५४ बर्षको उमेरमा पार्टी सभापतिमा लडेका थिए देउबा । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल २०५१ सालमै ४९ बर्षको उमेरमा सभामुख बने । चिरञ्जीवि वाग्ले २०५३ सालमै नवौं महाधिवेशनमा ४०—४५ बर्षकै उमेरमा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालासंग ‘सभापति’मै भिडेका थिए । नरहरि आचार्यले पनि ५० बर्षकै हाराहारीको उमेरमा चुनौति दिएका थिए । तर, अहिले कांग्रेसभित्र ५० बर्ष भन्दा कम उमेरमै मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभामुख, अन्य कुनै कार्यकारी पद वा पार्टी नेतृत्वमा पुग्न अथवा आफ्नो समूहबाट आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका लागि ‘लाइन’ पाउन ‘पापड बेल्नुपर्ने’ अवस्था छ । २०७२ को १३औं महाधिवेशनमा आफ्नै ससुरा बुवा अर्जुन नरसिंह केसी र विपीपुत्र शशांक कोइरालासंग महामन्त्रीमा भिडेका युवा नेता गगन कुमार थापा अब फेरि अर्को दुष्साहस गर्दै सभापतिमा भिड्ने पक्षमा छैनन् । किनभने उनी यो पटक कम्तीमा जित्ने ‘सूत्र’ खोज्दैछन् । तर, १३औं महाधिवेशनमा केन्द्रिय सदस्य मात्रै जितेका कल्याण कुमार गुरुङ भने आफ्नो टिमभित्रै ‘शालीन विद्रोह’ गर्दै सभापतिमै भिड्ने दृढनिश्चयी देखिन्छन् । तर, समकालीन/सहकर्मीहरुको दरिलो साथ नपाउँदा एक्लो भएर उनले पनि आफ्नो ‘पद’ सुरक्षित गर्नलाई ‘त्वम् शरणम् गर्ने कि लोभ लालच नराखेर न्याय र परिवर्तनका लागि दृढसंकल्पित बन्ने...निर्णय उनकै हो ।
पहिलो र दोस्रो पुस्ताको ‘अन्धभक्त’ भएर न्याय र परिवर्तनका लागि युवा नेतृत्व जुर्मुराउन सक्दैन । हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउँदै सबै युवा नेता ‘गोलबन्द’ नभई पार्टीले ‘काँचुली फेर्न’ सक्दैन भन्ने यथार्थलाई हृदयंगम गर्न जरुरी छ । आशा गरिएका हरेक युवा नेताले पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताको ‘आशिर्वाद’ कुरेर बस्ने हो भने परिवर्तन सम्भव होला ? व्यक्तिबादी भएर अमुक नेताको ‘देवत्वकरण’ वा फरक समूहमा रहेका कारण मात्रै उसको ‘कटु विरोध’ को शैलीले पार्टीमा कस्तो संस्कार झांगिदै जाला ? बेलैमा विवेचना हुन जरुरी छ । गुट वा समूहलाई मजबुत बनाउन स्वयम् तेस्रो पुस्ताका नेताहरुको ‘लोभलाग्दो’ अग्रसरताले पार्टीभित्रको परम्परागत प्रबृत्ति भत्काउन सक्ने अवस्था रहँदैन । बाहिर चर्का कुरा गर्ने तर निर्णय प्रक्रियामा हिस्सेदार हुँदा पनि आफ्ना एजेण्डालाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेको अवस्था छ । बाहिर पहिलो पुस्ताका नेतालाई ‘धारे हात’ लगाउने तर उसकै टिममा पर्न ‘मरिहत्ते’ गर्ने अवस्थाले कसरी नयाँ पुस्तामा आशाको सञ्चार गर्न सक्ला ? १३औं महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमितिमा युवा नेताहरुको राम्रै उपस्थितिलाई सुनिश्चित ग¥यो । तर, उनीहरुको भूमिका आशातीत भएन । नेताहरुले गरेको निर्णयलाई ‘निर्णयार्थ’ प्रस्तुत गर्दा थपडी बजाउने बाहेकको भूमिका देखिएन । तेस्रो पुस्ताका नेताहरु सबै एकै ठाउँमा रहेर अब आफ्नो पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि ‘इन्डोर्स’ गर्न दृढ संकल्पित हुनुपर्दछ ।
समय अनुसार पार्टी जीवन सञ्चालनार्थ भिजन र मिसन भएन भने उचित गोरेटो तय गर्न सकिँदैन । आफ्नो मिसन र भिजनले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसले गर्ने योगदान ‘नगण्य’ हुन्छ । समय र परिवेशले सफल सावित गर्न नसकेको नेतृत्वलाई ‘काँध’मै राखिरहन जरुरी छैन । इतिहासले त्यसलाई ‘ठूलो भूल’ भन्नेछ ।
‘नेता’हरुको आलोचना गरेजस्तो गरिरहने तर पार्टी जीवनमा देखिएका विकृति र विसंगति विरुद्ध ‘चुँ’ नगर्ने शैलीले पार्टी बन्दैन । कांग्रेसको ‘नर्सरी’ मानिने नेपाल विद्यार्थी संघको खराब हबिगत हुँदा पनि विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका युवा पुस्ताका नेता किन बोल्दैनन् ? तदर्थबाद र टिके प्रथामा चलेको नेविसंघ ‘लुलो’ हुँदा पनि युवा नेताहरु चिन्तन मनन् गरिरहेका छैनन् । आफ्नो गुटका विद्यार्थीलाई टिके कमिटिमा ‘घुसाउने’ चिन्ता मात्रै गर्छन् । ५० नाघेका मान्छेलाई विद्यार्थी संगठनको ‘मूली’ बनाइन्छ । म्याद थप्दै थप्दै भागबण्डामा बल्लतल्ल कनीकुथी घिस्रिरहेको नेविसंघ युनिभर्सिटी पढिरहेका छोराहरुका ‘बुवा’ लाई थमाइन्छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट रिटाएर भएका पात्रलाई व्यवस्थापनका नाममा तरुण दलको जिम्मा लगाइन्छ । ‘टिम स्पिरिट’ नहुँदा त्यसको ‘आउटपुट’ छैन । भागबण्डामा पदाधिकारी टुंग्याइए पनि कमिटिले पूर्णता नपाउँदा गतिविधि शून्य प्रायः छ । यसरी कसरी जागृत हुन्छ पार्टी ? यसमा युवा भनिएका ६० बर्ष कम उमेरका नेताहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिका खै ? समयमै अधिवेशन नहुँदा नेतृत्व पंक्ति जाम भएर बस्ने परिपाटी विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै निर्णायक पहलकदमी लिनु पर्दैन ? नेतृत्वले गरिरहेका ‘आत्मघाती’ निर्णयहरुलाई ‘चेक’ गर्न सक्ने ल्याकत नराखेर सधैं ‘अन्धभक्त’ भइरहने कि पार्टी बनाउने स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अब ‘शालीन विद्रोह’ गर्ने ? आशा गरिएका युवा नेताहरुले यसलाई गम्भीरतपूर्वक चिन्तन गर्ने बेला भएन र ? यसको सुखद् शुरुवात गर्ने ‘मेलो’ अब १४औं महाधिवेशन हुन सक्छ भन्ने हेक्का राखौं ।
१४औं महाधिवेशनमा वडादेखि केन्द्रैसम्म युवा पंक्तिको सशक्त उपस्थिति हुने अवस्था देखिएकाले कांग्रेसको स्वर्णीम भविष्यका लागि आफू पनि बदलिने र अरुलाई पनि बदल्ने सोचका साथ युवा नेताहरुले फराकिलो दृष्टिकोण र खुला हृदयका साथ ‘पाको पुस्ता’लाई सम्मानपूर्वक विदाई गर्दै नेतृत्व लिने कुरामा आफूलाई अग्रसर गराउनुपर्दछ ।
समय अनुसार पार्टी जीवन सञ्चालनार्थ भिजन र मिसन भएन भने उचित गोरेटो तय गर्न सकिँदैन । आफ्नो मिसन र भिजनले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसले गर्ने योगदान ‘नगण्य’ हुन्छ । समय र परिवेशले सफल सावित गर्न नसकेको नेतृत्वलाई ‘काँध’मै राखिरहन जरुरी छैन । इतिहासले त्यसलाई ‘ठूलो भूल’ भन्नेछ । समय सान्दर्भिक नठहरिएको नेतृत्वको ‘बुई चढेर’ बैतर्नी पार हुँदैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्दछ । नेपाली कांग्रेसमा बाजे, बाउ, छोरा र नाति पुस्ताका बीचमा कार्यशैली र कार्यढाँचाका हिसाबले फरक छुट्याउन नसक्ने अवस्थाले गाँजेको छ । स्कुलिङ के थियो, के छ र के हुनेछ भन्ने कुराले त अर्थ राख्ला तर इच्छाशक्ति र अठोट के छ भन्ने प्रसंगले ठूलो अर्थ राख्ने कुरामा दुई मत छैन । शीर्ष नेतृत्वले जे भन्यो त्यसैमा ‘सहीछाप’ लगाउने प्रबृत्तिले पार्टीभित्र जोडतोडले मुखरित भइरहेको नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहसलाई ‘मजाक’ बनाइरहेको त छैन ? यसमा घोत्लिने कि ? अब सबै परिवेशहरुको निर्मम समीक्षा गर्न युवा पुस्ताका नेताहरुले ‘कुल माइन्ड’मा अग्रसरता देखाउने कि ?
उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री वा केन्द्रिय सदस्यमा आफूलाई सुनिश्चित गर्न कुनै अमुक नेतालाई बोकिरहने कि आम मानिसले अपेक्षा गरेको परिवर्तित ‘नवीन कांग्रेस’ बनाउन मोर्चाबन्दी कस्ने ? विभाजित मन र मानसिकताले सृदृढ कांग्रेसको ‘मुकाम’ चुम्न सकिँदैन । तसर्थ, सिरिफ कांग्रेस भएर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्दै बाटो विराएको क्षणलाई पनि ‘ट्रयाक इन’ गर्ने गरी आलोचनात्मक चेतको विकास गर्न जरुरी छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ‘हँ मा हँ’ मिलाएर अन्धभक्त भइरहने कि पार्टी बनाउने अवसरलाई ‘क्यास’ गर्न युवा नेतृत्व पंक्ति मिलेर ‘सार्थक हस्तक्षेप’का लागि ‘ग्राउण्ड’ बनाउने ? अहिलेको ‘यक्ष प्रश्न’ यही हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा ‘बुढा’ नेताहरुलाई सत्तोसराप गर्ने तर स्वार्थ मिल्यो भने ‘भक्तिगान’ गाउने प्रबृत्ति त्याग्न सक्नुपर्दछ । १४औं महाधिवेशनमा वडादेखि केन्द्रैसम्म युवा पंक्तिको सशक्त उपस्थिति हुने अवस्था देखिएकाले कांग्रेसको स्वर्णीम भविष्यका लागि आफू पनि बदलिने र अरुलाई पनि बदल्ने सोचका साथ युवा नेताहरुले फराकिलो दृष्टिकोण र खुला हृदयका साथ ‘पाको पुस्ता’लाई सम्मानपूर्वक विदाई गर्दै नेतृत्व लिने कुरामा आफूलाई अग्रसर गराउनुपर्दछ । ‘म’ नै हुनुपर्छ भन्दा पनि ‘मेरो पुस्ता’को सशक्त उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने यथार्थलाई मनन गर्दै पार्टीलाई हित नहुने कुरामा ‘अन्धभक्त’ भएर होइन ‘शालीन विद्रोह’ गरेर आशाको नयाँ क्षितिज उघार्न दृढ संकल्पित हुनुपर्दछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २५, २०७८, १६:३९:००